Ukuphupha ngempazamo Discover Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Xa ufayila okanye ukrwela, umphezulu wento uqhele ukwenziwa ngesandla ukuyibumba okanye ukuyigudisa. Phantse zonke izinyithi, iinkuni kunye neeplastiki zinokuqwalaselwa ngefayile ngale ndlela. Iminwe kunye neenzwane, kunye neempuphu zezilwanyana, zinokuyilwa nefayile.
Si el mundo amaphupha ayafakwa, ngokuqinisekileyo oku kufuneka kuthathelwe ingqalelo kutoliko lwamaphupha, kuba isilumkiso esibalulekileyo sinokufihlwa kulo mfanekiso wephupha.
1 Uphawu lwephupha «ugcino» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ugcino» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ugcino» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ugcino» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukugcwalisa kwilizwe lamaphupha kunokuchazwa ngokwahlukileyo. Ukuba iphupha libona omnye umntu efayile, uphando lwamaphupha lutolika lo mfanekiso wephupha njengophawu lwe msebenzi Kwaye impumelelo. Nangona kunjalo, ibandakanya enye isilumkiso. Ukuphupha kufuneka kuqiniseke ukuba awuboyikisi abanye abantu ngokuziphatha kwakho ngamanye amaxesha ngokungakhathali. Kubalulekile ukuba uhlale uyazi ngezenzo zakho kunye nokuziphatha.
Ukuba iphupha likwiphupha lehlabathi ukugqibezela into, oku kuthathwa njengenkomba ezayo. mpu melelo. Unokubhengeza kwakhona umsebenzi omtsha ngalo mfanekiso uphuphayo. Ukuba iphupha lifaka isiqwenga sensimbi, uya kuba nempumelelo ebomini bakho, njengoko uya kusebenza nzima kuso. Xa ugcwalisa isiqwenga somthi, kukho into engaqinisekanga ncam Iinkampani a.
Ukuba umntu ophuphayo ufake iifayile zakhe xa elele, uya kuziva ezikhulu. isithukuthezi ebomini bokuvuka. Ukuba ufaka iinzipho zakho ngexesha lokucoca umzimba, kuya kufuneka ulumkele ukunyeliswa kakubi kwabanye.
Uphawu lwephupha «ugcino» - ukutolikwa kwengqondo
Inkcazo-ntetho okanye ifayile ikwinkcazo yamaphupha ezengqondo njengophawu lwamaninzi kunye namancinci Ukuphoxeka itolikwe kubomi bemihla ngemihla. Iziphumo zoku kukuphulukana kwamathemba kunye neenjongo, amaphupha aphulukana ngakumbi nangakumbi.
Ngokwale ndlela, ukuphupha kukodwa sisiqwenga somsebenzi, esenziwa ngoovimba, isimboli sobomi, kwaye ngenxa yoko siye siphulukane nokuzimela.
Olunye utoliko ngokophando lwamaphupha lubona ubuchule kunye nomfanekiso wephupha amandla okudala yokuphupha, ekunceda ukuba ubumbe ubomi bakho ngokweengcinga zakho. Emva koko, ngokomfuziselo, ubuphucula ubomi bakhe ukuze abuxonxe ngokweminqweno yakhe.
Nangona kunjalo, inokuba yiyo isilumkiso fihla ngasemva kwalo mfuziselo, ekufuneka uqaphele. Kule meko, iphupha liyacelwa ukuba ungaliyeki, kodwa uhlale usebenza ngokuziphatha nakwindlela oziphethe ngayo, ugxile kuwe. Kungale ndlela kuphela apho ubuntu bunokomelezwa kwaye buchasane nefuthe elibi kwaye baphile ebomini.
Uphawu lwephupha «ugcino» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwamaphupha okomoya, umboniso ubizwa ngokuba Amandla okudala Itolikiwe